नेकपा एकता विचारका हिसाबले भएकै होइन
२०७६ असार १८ बुधबार ११:५८:००
नेपालका पाका कम्युनिस्ट नेतामा पर्छन् मोहनविक्रम सिंह । अहिलेका थुप्रैै कम्युनिस्ट नेताका गुरु समेत मानिने सिंह आफ्ना चेला चपेटाहरुको कार्यशैलीप्रति भने सन्तुष्ट छैनन् । हालै सम्पन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) को आठौँ महाधिवेशनपछि पुनः सो पार्टीको महामन्त्रीमा निर्वाचित ८५ वर्षिय अर्धभूमिगत नेता सिंहसँग हामीले यसपालि विस्तृत कुराकानी गरेका छौं । संसदमा सानो उपस्थिति रहेपनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक खालको छुट्टै छाप रहेका र कसैले चाहेर पनि बिर्सन नसकिने नेता सिंहसँग बाह्रखरीका लेखनाथ अधिकारीले गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः
केही अघि सम्म पार्टीको महाधिवेशनमा व्यस्त थियौं । अब महाधिवेशन सकिएको छ । हामी दस्तावेजलाई अन्ति रुपमा दिने काममा लागेका छौं ।
महाधिवेशनले मुलुकको समग्र अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्यो त ?
देशको अवस्था सन्तोषजनक छैन । राम्रो काम भइरहेको लागेको छैन । महाधिवेशनले पनि यही कुरा महसुस गरेको छ । राम्रो काम हुन नसकेको र परिवर्तन पक्षधर शक्तिहरुका गतिविधिले गर्दा लोकतन्त्र विरोधी, जनता विरोधी र गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरु सल्बलाई रहेको महसुस गरेका छौं । यो राम्रो भएन । खतरा बढ्दै गयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । बामपन्थी सरकार बनेपनि कार्यशैली राम्रो भएन । त्यसले गर्दा धर्मको नाममा तथा अन्य हिसाबले पुराना शक्तिहरुले टाउको उठाउन खोजे भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको देखिएको छैन । यो चिन्ताजनक अवस्था हो ।
दुई तिहाईको सरकार भएर पनि जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसक्दा सबै उस्तै रहेछन् भन्ने भान पर्न थालेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सबै एउटै त होइनन् । राणा शासन, राजाको शासन, पञ्चायत एउटै कुरा होइनन् । तर, जनताको अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेकोले निराशा बढेको हो । अहिले आएको व्यवस्था एउटै होइन । पञ्चायत, कांग्रेस सबै एकै हुन् भन्ने लाग्दैन । कांग्रेसको आफ्नै, राप्रपाको आफ्नै अनि मधेशवादी दलहरुको आफ्नै खालको उदेश्य छ । त्यसैले सबै एकै हुन् भन्ने कुरामा हामी लाग्दैनौं । यसको मतलब सरकारले सही दिशामा काम गरेको छ भन्ने पनि होइन । यो व्यवस्थालाई अझै राम्रो बनाउनुपर्छ । प्रतिगामी दिशामा उन्मुख हुन दिनु हुँदैन ।
तपाईहरुको महाविशेनपछिको दस्तावेजमा अहिलेको सरकारलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार नै होइन भन्नु भएको रहेछ । किन यसो भन्नु भएको ?
हो, हामीले भनेका हौ । हामीले पार्टी हेरेर समर्थन वा विरोध गर्दैनौं । राम्रो सरकार छ भने त्यसको समर्थन गर्छौ । राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग बनाउने निर्र्णय गर्दापनि हामीले समर्थन गरेका थियौं । अहिलेको सरकारले पनि राष्ट्रिताका कुरा उठाएकाले हामीले समर्थन गरेका हौं । पूर्व एमाले र माओवादीले आफनो सिद्धान्त छोडिसकेका छन् । ती दुई मिलेर बनेको पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी हुन सक्दैन । त्यही भएर हामी मान्दैनौं । तर, हामीले समर्थन गरेका छौं । यो कम्युनिस्ट पार्टी भएर समर्थन गरेको होइन । हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाई पनि समर्थन गरेका थियौं । काम हेरेर समर्थन वा विरोध गर्ने हो । पार्टी हेरेर होइन । तर अहिलेको नेकपालाई हामी कम्युनिस्ट पार्टी मान्दैनौ ।
तपाईहरुको पार्टी महाधिवेशनले छिमेकी चीन र भारत दुवैलाई साम्राज्यवादी भनेछ । तपाईहरु चीनसँग त नजिक हुनुहुन्छ होइन किन यस्तो मूल्यांकन आयो ?
चीन पहिला समाजवादी देश हो । तर, अहिले त्यो देश पूँजीवाद तर्फ गइसकेको छ । अनि भारतले अतिक्रमण, हस्तक्षेप तथा नाकाबन्दी सम्मका गतिविधि गराएको छ । त्यसैले हामीले दुवैलाई साम्राज्यवादी भनेका हौं । तर, मुलुकलाई खतराको हिसाबले हेर्दा चीन भन्दा भारत बढी खतरा छ ।
चीनले बीआरआइलाई अघि बढाएको छ भने अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई अघि बढाएको छ । यो हिसाबले गर्दा नेपाल उनीहरुको खेल मैदान हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि पाइन्छ । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
हो, उनीहरुले आफ्नो नीति बनाएका छन् । तर, हामीले कस्तो नीति बनाउने भन्ने कुरा आफ्नो देशको हितलाई हेरेर बनाउने हो । यसमा देशको नेतृत्व लिएका व्यक्तिले सुझबुझ देखाउन सक्नुपर्छ । हामीले तटस्थ रुपमा रहेर नै दुवै पक्षबाट फाइदा लिन सक्छौं । हामीलाई चीन, भारत र अमेरिका सबैको सहयोग चाहिन्छ । त्यसैले कतै ढल्केर होइन सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नु पर्छ । हामीले हाम्रो देशको स्वतन्त्रता र फाइदालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । यो सबै कुरा नेतृत्वको कुशलतामा भर पर्ने कुरा हो ।
अर्को छिमेकी भारतमा हालै सम्पन्न निर्वाचनपछिको परिणामलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? नेपालमा के असर पर्न सक्छ ?
भारतको चुनावपछि धार्मिक कट्टरताको खतरा देखिएको छ । तर उनीहरुले चाहे अनुसार नेपालमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । अन्य पक्षहरु पनि छन् । जस्तो विपक्षी कंग्रेस आइ देखि बामपन्थी पार्टीहरु पनि छन् । अहिले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले राजावादी र हिन्दुवादीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर सफल हुँदैन ।कसैले कुनै योजना बनाउँदैमा सफल हुन्छ भन्ने छैन ।
भाजपा नेपालमा राजा र हिन्दु धर्मको पक्षमा लागेकै हो त ?
हो, यो त प्रष्टै छ ।
भारतमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु चुनावमा किन बढारिएका होलान् ?
कम्युनिस्टलाई अहिले विश्वभरी नै अप्ठेरो अवस्था रहेको छ । त्यही भएर त्यहाँ पनि असर परेको हो । भारतीय कम्युनिष्टहरुको पहिला रसियाका कम्युनिस्टसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । तर, रसियामा पनि कम्युनिस्टहरु गए, भारतमा पनि असर परेको छ । तर भारतका कम्युनिस्टहरुमा पनि विस्तारवादी शैली पाइन्छ । सबै त छैनन् तर विदेशनीतिमा उनीहरुको खासै फरक पाइँदैन ।
तपाईको पार्टी अहिले विद्रोह गरिरहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई मित्र शक्ति मान्छ होइन ?
हो, हामीले मित्र शक्ति मानेका छौं । तर उहाँहरुले अघि बढाएको कामलाई चाहिं गलत ठान्छौं ।
तपाईको अहिले विप्लवसँग सम्पर्क छ कि छैन ?
मेरो सम्पर्क छैन ।
प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा चाहिँ विरोध गर्नुभयो नि ?
राजनीतिक शक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने कुरा संविधानमा नै छैन । त्यसैले विरोध गरेको हो ।
अनि हत्या हि‌सा मच्चाउनु पनि राजनीति हो र ?
त्यस्तो कार्य गर्नु गलत हो । तर, जसले गरेको छ उसलाई कारवाही गर्नुपर्यो । पूरै संगठनलाई नै प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन, सो संगठनका कार्यकर्तालाई जथाभावी पक्रेर कारवाही गर्न पाइँदैन । त्यसले समस्याको समाधान हुँदैन ।
पहिलाको ‘जनयुद्ध’ले सिर्जना गरेका समस्या सुल्झिनसक्दै अहिले फेरि अर्को सशस्त्र युद्ध गर्न विप्लव तम्सिनुको कारण के हो ?
हामीले पहिला पनि भन्दै आएका थियौं, त्यतिबेलाको युद्धपनि गलत थियो र अहिलेको पनि गलत छ । तर जनचेतना पुग्न नसकेका कारण त्यसको फाइदा उठाउने काम उनीहरुले गरिरहेका छन् । यस्तो युद्ध गर्ने, केही बार्गेनिङ्ग गर्ने र केही पाउने जस्ता काम गरिरहेका छन् ।आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यो सबै काम भइरहेको छ ।
पहिलाको युद्ध त सफल नै भयो क्यार होइन ?
सफल भनेको के पद पायो भन्ने कुरा मात्रै होइन । त्यसले देश र जनतालाई के दियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । त्यसैले उनीहरुको युद्ध विकृत रुप हो । अहिलेको विप्लवको युद्धपनि त्यस्तै हो ।
तपाईहरु चुनाव पनि जित्न सक्नुहुन्न । अरुले युद्ध गरेर चुनाव जितिसके । अब कसलाई सफल भन्ने ?
चुनाव जित्ने भन्ने कुराले मात्रै सफलता वा असफलता भन्न मिल्दैन । देशले के पायो जनताले के पाए भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । जनतामा जनचेतना नभएकै कारणले उनीहरु सफल भएको जस्तो देखिएको हो । चुनाव जितेका हुन् । उनीहरु चुनावमा झूठो कुरा गर्छन् । पैसा बाँड्छन् । राँगा काटेर खुवाउँछन् । हामी त्यो गर्न सक्दैनौं । जनताको चेतनास्तर बढेपछि उनीहरु पाखा लाग्ने दिन आउँछ ।
जनचेतना जगाउने काम त तपाईहरुको दलको पनि होइन र ?
हामीले गरिरहेका छौं । तर हामीले गरेर मात्रै पनि हुँदो रहेनछ । धेरैलाई आआफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ । मानिसहरु कुन दल सत्तामा गएपछि के फाइदा हुन्छ भनेर लागेका छन् । तत्कालीन फाइदालाई लिएर मान्छेले भोट हालेको देखिएको छ । त्यसैले हामीले सबै कुरा बुझाउन नसकेको हो । कम्युनिस्ट पार्टीमा विकृति पहिला देखि नै रहेको छ । पहिला कम्युनिस्ट पार्टीका नेता डा केशरजंग रायमाझी राजासँग मिल्न जानु भएको थियो । अहिले पनि त्यसखालको विकृति रहेको छ ।
तपाईहरु अरुलाई त्यसो भन्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई ठूला भनिएका बाम पार्टीले ‘ससाना दोकान खोलेर पुराना कुरा मात्रै रट्ने मान्छे’ भन्छन् नि ?
हामी विचारका दृष्टिले प्रष्ट छौं । विकृतिमा लागेका छैनौं । विकृतिमा लागेर कहिँ पनि पुगिँदैन ।
पहिला तपाईलाई प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले खुब गाली गर्नुहुन्थ्यो, अहिले गाली गरेको सुनिदैन अब कुरा मिलेको हो ?
उहाँहरुको आफ्नो कुरा हो, उहाँहरुको कमजोरीको कुरा हो । तर, हामीले अहिलेसम्म कुनैपनि दस्ताबेजमा कसैलाई गाली गरेका छैनौं । व्यक्तिगत हिसाबले उहाँहरुसँग नराम्रो छैन ।
भेटघाट हुन्छ अहिले ?
भेटघाट त पछिल्लो समयमा भएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीसँग कस्तो सम्बन्ध छ ?
उहाँसँग पनि भेटघाट छैन । तर राम्रै रुपमा लिएका छौं ।
कम्युनिस्ट नेताका कतिपय कार्यशैली, व्यवहार, नातावाद हेर्दा राजा र कम्युनिस्ट नेता भनेका एकै खालका हुन् कि के हो भन्ने जनतामा पर्न थालेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
साँच्चै कम्युनिस्ट नेताले त्यस्तो गर्न सक्दैनन् । तर, हाम्रोमा विकृति रहेको छ । त्यही विकृतिले गर्दा यस्तो देखिएको हो । कार्यशैलीका कारण मानिसमा भ्रम परेको हो । तर, कम्युनिस्ट र राजा भनेका एउटै हुने कुरा हुँदैन । त्यसैले कम्युनिस्ट र राजतन्त्र एउटै हुन् भन्ने सोच नै गलत हो ।
उत्तर कोरियामा पनि त्यस्तै छ त ?
हो, राजतन्त्रमा पनि अधिनायकवाद हुन्छ अनि कम्युनिस्टमा पनि त्यस्तो देखिन्छ । तर, जनतालाई कसरी सम्बोधन गरेको छ भन्ने कुरा फरक हुन्छ । कम्युनिस्ट हुँ भन्दैमा सबै कम्युनिस्ट हुँदैनन् । कम्युनिस्टले किसान, मजदुर र सर्वसाधारण जनतालाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ ।
यहाँले राजनीति थालेको २००७ सालदेखि अहिले सम्म देशमा किन विकास हुन नसकेको ? नेताहरु असफल भएर हो ?
केही नभएको भन्न मिल्दैन । त्यतिबेला र अहिलेमा धेरै फरक भएको छ । त्यो मैले मात्रै गरेको भन्दिन । हामी सबै मिलेर गरेको हो ।
नेपाल भन्दा पछि स्वतन्त्र भएका मुलुक कहाँबाट कहाँ पुगिसके, हामी भने सधै युद्ध गर्ने भन्ने अनि विकास चाहिं कहिले गर्ने ?
हो, अरुको तुलनामा केही ढिलाई भएकै हो । राजनीतिमा आएको विकृति र बेलाबेलामा हामी प्रतिगमनसँग जुध्नु परेको कारणले पनि यसो भएको हो । व्यक्तिगत रुपमा के मिल्यो के मिलेन भन्ने कुरा होइन । समाजले के पायो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यो बीचमा थुप्रै क्षेत्रमा सुधार भएको छ । देशमा रुपान्तरण भएको छ । तर, हाम्रोमा केही ढिला भएको भने हो ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्वमा पुगेपछि चाहिँ छोड्नै मन नलाग्ने हो ? केही कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्तो देखिन्छ नि दशकौं सम्म नेतृत्वमा बस्ने, समय सन्दर्भ अन्तै पुगिसकेको हुन्छ तर नेता हुन मन लागिरहने के रहेछ रहस्य ?
कुनैपनि पार्टीभित्र नेताको आवश्यकता महसुस गरुन्जेल र त्यो व्यक्तिले काम गर्न सकुन्जेल देश र जनताका आवश्यकता सम्बोधन गरुन्जेल नेता भइने हो ।
नेता बन्न पाइएन भने पार्टी नै फुटाएर हिँड्ने अनि फेरि नेता बन्ने चलन पनि छ क्यार होइन ?
हो, बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो पनि देखिएको छ ।
अहिलेको सत्तारुढ पार्टीभित्र एकता घोषणा भएको १३ महिनापछि विचारको बारेमा विवाद गरेको पनि सुनियो । बहुदलीय जनवाद की जनताको जनवाद भन्ने । खास के हो यो ? जनताको समस्या एकातिर छ हामी शब्दको चक्करमा समय खेर फालिरहेका त होइनौं भनेर पनि जनस्तरमा कुरा उठिरहेको छ, यसलाई कसरी लिने ?
विचारको हिसाबले उनीहरुको एकता नै भएको होइन । चुनावमा फाइदा उठाउने र मिलिजुली भागबण्डा गर्ने हिसाबले यो सबै भएको हो । पहिलाको माओवादीले पनि विचार छोडेको र एमालेले पनि विचार छोडेको अनि अर्को विचार नलिइसकेको कारणले नै हामीले त्यो पार्टीलाई कम्युनिस्ट होइन भनेका हौं ।
देशमा जनताको पीडा एकातिर हुन्छ तर शब्दजालमा अल्मलिने चलन कम्युनिस्ट पार्टीमा अलि धेरै हुन्छ होइन ?
शब्दजाल नै त नभनौं । यो राजनीतिक स्वार्थको खेल हो । त्यही भइरहेको छ ।
अनि कहिलेकाँही हामी जाने चाहिं समाजवादमै हो भन्छन् नि कम्युनिस्ट नेताहरुले । त्यो भनेको के हो ? जनताले कुरा नबुझेर हैरान छ ।
अहिलेको सत्तारुढ पार्टीका कतिपय नेताले त्यसो भनेपनि उनीहरु समाजवादमा जाँदैनन् । त्यसका लागि दर्शन र नीति प्रष्ट हुनुपर्छ । हामी अहिले समाजवादी दिशातर्फ गइरहेका छैनौं । भन्नको लागि भनिएपनि पूँजीवाद तर्फ गइरहेका छौं । समाजवादको नाम मात्रै लिइएको हो ।
अहिलेको अवस्थामा देशमा समृद्धि आउने सम्भावना कत्तिको छ ?
यसरी समृद्धि आउँदैन । योजना, दृष्टिकोण सबै स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले त अस्थिरता देखिएको छ । विदेशीको चलखेल देखिएको छ ।
सरकारले स्वतन्त्रता पक्षधरलाई अलि पेल्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । जस्तो मिडिया, मानवअधिकार आयोग लगायतलाई । यसबारेमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?
हामीले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकको विरोध गरेका छौं । यी विधेयकहरुले देश अधिनायकवाद तर्फ जान लागेको त होइन भन्ने संकेत गरेको छ । यस्ता विधेयकले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ । त्यसैले यो क्षेत्रलाई सच्याउनुपर्नेछ भने विद्यमान कानुन अनुसार नै सच्याउनुपर्छ तर स्वतन्त्रताका आधारलाई नै भत्काउने तिर लाग्नु हुन्न ।
सत्तारुढ पार्टीभित्रैबाट सरकार फेर्ने हल्लापनि चलेको देखिन्छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारले सबै राम्रा काम नगरेको भएपनि केही सकारात्मक दिशातर्फ चाहिं गएको छ । स्थिरताको आशा छ । तर, अहिले नै सरकार गिराउने वा अन्य गतिविधिहरु अघि बढे भने त्यसले प्रतिगमनलाई नै मद्दत गर्छ । अहिलेको सरकार गिराउने काम भइहाल्यो भने विकल्प के त भन्ने प्रष्ट छैन । पछि आउनेले पनि राम्रो गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । हुनत यो उनीहरुको पार्टीको आन्तरिक विषय हो । तरपनि सरकार बदल्ने कार्यतिर लागियो भने लोकतन्त्र र गणतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्छ । तर, सरकार अहिलेकै हिसाबले चलेर भने हुँदैन । आफ्नो कार्यशैली बदल्नु जरुरी छ ।
सरकारले कामै गर्न सकेन भने त सत्तारुढ पार्टीले विकल्प सोच्न सक्ला नि त ?
त्यो उनीहरुको आन्तरिक कुरा हो । सरकारले कार्यशैली सुधार्ने बेला चाहिं भएको छ । सरकारलाई प्रशासन, प्रहरी कसैले पनि सहयोग गरेको जस्तो देखिदैन । निर्मला पन्तको हत्या भएको यतिका समय भइसक्दा पनि हत्यारालाई पक्राउ गर्न सकिएको छैन । भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । त्यसैले सरकारले कार्यशैली बदल्नु जरुरी छ । नत्र यस्तै हो भने लोकतन्त्र र गणतन्त्र खतरामा पर्न सक्छ ।